ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၂)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!5July 2011 at 11:08
မမရေ ..မပျက်မကွက် အခန်းဆက်လေး လာဖတ်တယ်နော်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)5July 2011 at 23:19
လွမ်းနေတဲ့ အလွမ်းမီးတွေ ငြိမ်းပါစေလို့
အဖြူရောင်နတ်သမီ6းJuly 2011 at 23:30
ဒီမှာလည်း လွမ်းနေတာ ဆွေလေးရေ...
မြစ်ကျိုးအင်း7July 2011 at 06:30
ဒီတပိုင်းက တို တယ်။ စာများများရေးပါး)
mabaydar 20 February 2012 at 21:10
ခုမှ ၁၀တန်းလေးဖြေပြီးယုံရှိသေးတာပဲ... ငယ်ပါသေးတယ်... ရသလောက် အချိန်ဆွဲထားနိုင်တာကောင်းတယ်... မြန်မြန်ကြိုက်ရင် မြန်မြန်ပြတ်နေအုံးမယ်...
ပထမပိုင်းနဲ့ ဒုတိယပိုင်းက ၁ရက်ပဲကွာတယ်... အစ်မက စာရေးတာ Commitment ရှိတယ်... အတုယူသင့်တယ်...
တက်လိုက်ရတဲ့ လှေကား ညောင်းလို့ တောင် ငါမနားခဲ့ ရဘူး...။ ။ ထမ်းလိုက်ရတဲ့ တာဝန် လေးလွန်းလို့ တစ်ခါတစ်ခါ အတွင်းပါကြေတယ်.။ ။ လုပ်လိုက်ရတဲ...
လွမ်းတယ် ချစ်ရယ် တူနှစ်ကိုယ် ယှဉ်ကာရယ် သပြေခက်ကိုင် နှင်းဆီတစ်ပိုင်နဲ့ မြတ်ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ရင်းမှာ တူနှစ်ပြိုင် ကုသိုလ်ထူးကာနှင့် ရေစက်ရယ...
စိတ်တွေသာ မျှောပြီးရင်မျှောပါနေတယ် အဖတ်ဆယ်တဲ့ ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ငါ..မရောက်ဖြစ်သေးဘူး... ကဗျာတွေသာ ရေးခြင်နေမိတယ် သံဇဉ်ညီတဲ့ ကာရံတွေတော့ ငါ ...
ဤခရီးနီးသလားဟု ကျွန်မကိုမေးလာခဲ့လျှင် ဝေးပါသည် ကျွန်မအတွက် ဝေးလွန်းနေပါသည်ဟုသာ ကျွန်မ ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀နှင့် နှိုင်းယှ...
(နုငယ်) ဟလို.. ***** ငယ် .မောင်ပါ။ မောင် ကြားချင်တဲ့ စကားပြောမှာလား ပြော.. (နုငယ်) အင်း. ပြောမှာ. *****ဟာ တစ်ကယ် .................ဒါဆို ခ...